လီဗာပူးလ်နဲ့ မန်စီးတီးတို့နဲ့အတူ ဘယ်အသင်းတွေက ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ရသွားမလဲ? – MySport Myanmar
လီဗာပူးလ်နဲ့ မန်စီးတီးတို့နဲ့အတူ ဘယ်အသင်းတွေက ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ရသွားမလဲ?
မနေ့က တစ်ရက်အတွင်းမှာပဲ အပြောင်းအလဲတွေ များစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကို ပရိသတ်တွေ သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းက ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက် အယူခံအောင်မြင်ခဲ့လို့ အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့်(၅)နေရာကအသင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် မျှော်လင့်ချက်က လုံးဝရပ်တန့်သွားခဲ့သလို မနေ့ညက ကစားသွားခဲတဲ့ ဆောက်သမ်တန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာ နိုင်ပွဲရရုံနဲ့ အဆင့်(၃)အထိကို တတ်လှမ်းခွင့်ရရှိမယ့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်း နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ ချေပဂိုးပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် အဆင့်(၅)နေရာမှာ ဆက်လက်ရှိနေသွားခဲ့ရပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေတွေအရ အဆင့်(၃)ကနေ အဆင့်(၆)နေရာက ဝုလ်ဗ်အထိ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် (၂)နေရာစာအတွက်ကို မျှော်မှန်းထားလို့ရပြီး ဝုလ်ဗ်က အဆင့်(၄)နေရာက လက်စတာနဲ့ (၄)မှတ်ပဲ ကွာဟနေတာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့လက်ရှိ Form အရဆိုရင်လည်း မျှော်လင့်လို့ရနိုင်တယ်လို့ ယူဆရမှာပါ။ ဝုလ်ဗ်က လက်ကျန်ပွဲတွေ ဘန်လေ(အဝေး) ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်(အိမ်)နဲ့ ချယ်လ်ဆီး(အဝေး) တို့နဲ့ ကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဘန်လေနဲ့ပဲလေ့စ်ပွဲတွေကို အနိုင်ရလိုက်တာနဲ့ နောက်ဆုံးပွဲက သူတို့အတွက် အဆုံးအဖြတ် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘန်လေနဲ့ပွဲမှာပဲ ရလဒ်တိမ်းစောင်းခဲ့ရင်တော့ ယူရိုပါလိဂ်လောက်ပဲ မျှော်မှန်းခွင့်ရပါတော့မယ်။
ပွဲဆက်များစွာ အနိုင်ရထားခဲ့ပြီး ပန်းဝင်ခါနီးမှ ခြေခေါက်လဲရတဲ့ ယူနိုက်တက်လည်း အခုလက်ရှိ အဆင့်(၅)နေရာမှာပဲ ရှိနေရတယ်ဆိုပေမယ့် လက်စတာနဲ့အမှတ်တူ ချယ်လ်ဆီးနဲ့(၁)မှတ်ပဲ ကွာဟလို့နေပါတယ်။ ဒီအသင်း(၄)သင်းထဲမှာ ယူနိုက်တက်က ပွဲအချောင်ဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့ လက်ကျန်ပွဲတွေမှာ ပဲလေ့စ်(အဝေး) ဝက်စ်ဟမ်း(အိမ်)နဲ့ လက်စတာ(အဝေး) တို့ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပွဲကပဲ သူတို့အတွက် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလူစာရင်းကိုပဲ ပွဲဆက်များစွာ အသုံးပြုရခြင်း နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ယူနိုက်တက်ခံစားနေရပြီး ပဲလေ့စ် ဝက်စ်ဟမ်းတို့ပွဲမှာလည်း ဂရုစိုက်ကစားဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
လက်စတာလည်း တစ်ရာသီလုံးနီးပါး ခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးမှ ဘောလုံးပွဲတွေ ပြန်လည်စတင်ချိန်ကနေဟစပြီး ရလဒ်တွေ ကမောက်မက ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင် ဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆန် ပါရဲရားတို့လို အမာခံကစားသမားတွေ ဒဏ်ရာရနေတာကလည်း အသင်းအတွက် ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ လက်စတာက လက်ကျန်ပွဲအကျပ်ဆုံးအသင်း ဖြစ်လို့နေပြီး ရှက်ဖီး(အိမ်) စပါး(အဝေး) ယူနိုက်တက်(အိမ်)တို့နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ကာ အသင်းရဲ့အဓိကနောက်ခံလူ ဆိုရန်ဂူပါ အဲ့ဒီပွဲတွေကို ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်နဲ့ လွဲချော်ရမှာဆိုတော့ ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းနေတဲ့ လက်စတာအတွက်က စိုးရိမ်စရာကောင်းနေပါတယ်။
အဆင့်(၃)နေရာမှာရှိနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီးကလည်း ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ကို ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက် အမှားခံလို့မရတော့ပဲ သေချာကြိုးစားသင့်နေပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးကတော့ လက်ကျန်ပွဲတွေမှာ နော်ရစ်ချ်(အိမ်) လီဗာပူးလ်(အဝေး) ဝုလ်ဗ်(အိမ်)တို့နဲ့ ကစားသွားရမှာဖြစ်ပြီး နောရစ်ချ်နဲ့ပွဲမှာတော့ အမှတ်ပြည့်ရဖို့ ကျိန်းသေနေပေမယ့် လီဗာပူးလ် ဝုလ်ဗ်တို့ ကစားရမယ့် ပွဲကျပ်တွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
MySport Myanmar2020-07-14T14:24:19+06:30July 14th, 2020|Champions League, Football, Premier League|